Zaw Hein, Author at Shwe Khit - Page 458 of 471
ရနျကုနျမွို့၏ အထငျကရ သူနာပွုတက်ကသို လျ ပွိုကြ ရခွငျး အကွောငျး အဖွပေျေါပွီ
ပွီးခဲ့သညျ့ အပတျက ပွိုကခြဲ့သော သူနာပွု တက်ကသိုလျ ကွံ့ခိုငျမှုရှိ/မရှိ နှငျ့ အဆောကျအဦး ကို ပွနျလညျ အသုံးပွုနိုငျရနျ ရှိ/မရှိမှာလညျး ယခု မလေကုနျ တှငျ သိရမညျဟု ဆိုသညျ။ အခုကတော့ ဆောကျလုပျရေး ဝနျကွီးဌာန ကနေ ၂ ရကျရှိပွီ၊ တိုငျတှေ၊ နံရံ တှအေားလုံး ကို တိုငျးတာပွီးတော့ ရှိသငျ့ရှိထိုကျတဲ့ အရညျအခငျြး ရှိ/မရှိ စဈဆေးနပေါတယျ။ ဒီဟာကနေ Report တှထှေကျပါလိမျ့မယျ။
ရှဘေ့ယျလိုလုပျမလဲဆိုတာကို ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာနက ဖှဲ့ထားတဲ့အဖှဲ့က ပွနျလညျပွီး ဆှေးနှေးတိုငျပငျပါ့မယျ။ အဲ့ဒီလိုလုပျပွီးမှပဲ အဖွထှေကျပါလိမျ့မယျ။” ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ အဆိုပါ သူနာပွုတက်ကသိုလျကို တညျဆောကျရနျ ပွညျမဟာကုမ်ပဏီက ၂၀၁၂ ခုနှဈတှငျ တငျ ဒါအောငျမွငျခဲ့ပွီး တညျဆောကျခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုနှဈတှငျ တညျဆောကျပွီး ၂၀၂၀ ခုနှဈ ၊ မလေ ၁၇ရကျ ၊ နလေ့ယျပိုငျးက ပွိုကခြဲ့သညျ။
ရနျ ကုနျတိုငျးဒသေကွီး ၊ လမျးမတျောမွို့နယျရှိ သူနာပွုတက်ကသိုလျအဆောကျအဦး၏ ရှပေို့ငျးမကျြနှာစာ ပွိုကရြခွငျးမှာ တှကျခကျြမှုအား နညျးခွငျး ၊ ကွီးကွပျမှုနှငျ့ အသုံးပွုထား သညျ့ သံခြောငျးမြား အားနညျးခွငျးတို့ကွောငျ့ ဖွဈကွောငျး ကနဦးစဈဆေးမှုမြားကိုပွုလုပျခဲ့သညျ့ မွနျမာနိုငျငံ အငျဂငျြနီယာအသငျးခြုပျ ဥက်ကဌ ဦးအောငျမွငျ့က ပွောသညျ။
သူ့ရဲ့အလေးနဲ့ တှကျခကျြထားတာက လိုအပျခကျြရှိတဲ့ အတှကျ ပွိုကတြာပေါ့။တှကျခကျြ မှု အားနညျးတယျ။ တညျဆောကျတဲ့ အခါမှာ လညျး ကွီးကွပျမှုနဲ့ အသေးစိတျထညျ့တဲ့ သံခြောငျးတှေ အားနညျးတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။သနာပွုတက်ကသိုလျ ပွိုကမြှုနှငျ့ပတျသကျပွီး မွနျမာနိုငျငံအငျဂငျြနီယာ အသငျးခြုပျရှိ ကြှမျးကငျြပညာရှငျ ၅ ဦးပါဝငျသောကျောမတီက စဈဆေးမှုမြားပွုလုပျခဲ့သညျ။
ရရှိခဲ့သော ကနဦးတှရှေိ့ခကျြအစီရငျခံစာကို မလေ ၂၃ ရကျနတှေ့ငျ ဒေါကျတာဇျောဝစေိုး ၊ ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျးအတှငျး ဝနျ နှငျ့ သုနာပွုတက်ကသိုလျ ပါမောက်ခခြုပျတို့ထံ ပေးပို့ထားပွီး မလေ ၂၅ ရကျနတှေ့ငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့ လြှပျစဈနှငျ့ လမျး ပနျးဆကျသှကျရေးဝနျကွီး ဒျေါနီလာကြျောထံသို့ ပေးပို့ထားကွောငျးသိရသညျ။
ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ပြိုကျခဲ့သော သူနာပြု တက္ကသိုလ် ကြံ့ခိုင်မှုရှိ/မရှိ နှင့် အဆောက်အဦး ကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရှိ/မရှိမှာလည်း ယခု မေလကုန် တွင် သိရမည်ဟု ဆိုသည်။ အခုကတော့ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ကနေ ၂ ရက်ရှိပြီ၊ တိုင်တွေ၊ နံရံ တွေအားလုံး ကို တိုင်းတာပြီးတော့ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အရည်အချင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဒီဟာကနေ Report တွေထွက်ပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့က ပြန်လည်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ့မယ်။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးမှပဲ အဖြေထွက်ပါလိမ့်မယ်။” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ အဆိုပါ သူနာပြုတက္ကသိုလ်ကို တည်ဆောက်ရန် ပြည်မဟာကုမ္ပဏီက ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တင် ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ မေလ ၁၇ရက် ၊ နေ့လယ်ပိုင်းက ပြိုကျခဲ့သည်။
ရန် ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ သူနာပြုတက္ကသိုလ်အဆောက်အဦး၏ ရှေ့ပိုင်းမျက်နှာစာ ပြိုကျရခြင်းမှာ တွက်ချက်မှုအား နည်းခြင်း ၊ ကြီးကြပ်မှုနှင့် အသုံးပြုထား သည့် သံချောင်းများ အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ကနဦးစစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ် ဥက္ကဌ ဦးအောင်မြင့်က ပြောသည်။
သူ့ရဲ့အလေးနဲ့ တွက်ချက်ထားတာက လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ အတွက် ပြိုကျတာပေါ့။တွက်ချက် မှု အားနည်းတယ်။ တည်ဆောက်တဲ့ အခါမှာ လည်း ကြီးကြပ်မှုနဲ့ အသေးစိတ်ထည့်တဲ့ သံချောင်းတွေ အားနည်းတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။သနာပြုတက္ကသိုလ် ပြိုကျမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ အသင်းချုပ်ရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ၅ ဦးပါဝင်သောကော်မတီက စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရရှိခဲ့သော ကနဦးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်း ဝန် နှင့် သုနာပြုတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်တို့ထံ ပေးပို့ထားပြီး မေလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်း ပန်းဆက်သွက်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်ထံသို့ ပေးပို့ထားကြောင်းသိရသည်။
လိုငျခြီးသီးကို အန်တရာယျကငျးစှာ စားနညျး
လိုငျခြီးသီးက အဟာရဓာတျ ကွှယျဝသညျ့အပွငျ အရသာလညျးရှိပါသညျ။ အနံ့မှေးသောကွောငျ့ လူတိုငျးနီးပါး နှဈသကျကွသညျ။
ထို့ကွောငျ့ အန်တရာယျကငျးအောငျစားမညျဆိုလြှငျ အောကျပါအခကျြမြားအတိုငျး..စားပေးရပါမညျ။
၁ ) – အသီးကိုမှညျ့မှ စားရပါမညျ – မမှညျ့သေးလြှငျ မစားရပါ။
မမှညျ့သေးခငျ စားမညျဆိုလြှငျ အသားထဲတှငျ ဟိုကျပိုဂလိုကျစငျ မြားစှာပါပါသညျ။
အစထေဲ့ မှညျ့သှားလငျြ အစထေဲ့ကို ရောကျကုနျသောကွောငျ့ စိတျခစြှာ စားနိုငျပါသညျ။
၂ ) – စားသညျ့အခါ အစကေို့လုံးဝ မစားရပါ – ဟိုကျပိုဂလိုစငျမြားသညျ အစထေဲ့တှငျ အဓိက ပါဝငျနခွေငျးကွောငျ့ဖွဈပါသညျ ။
အသီးမှညျ့လလေေ အစထေဲ့တှငျ ပါဝငျမူ မြားလလေေ ဖွဈပါသညျ။
၃ ) – စားသညျ့အခါ အစာ ( ထမငျးစားပွီး) စားပွီးမှစားရပါမညျ။
အစာမရှိပဲစားလြှငျ အစာအိမျထဲက MCPA- CoAအဖွဈကိုပွောငျးလဲသှားခွငျး ကွောငျ့ ဂလူးကိုဈ့ ကစြသေော အာနိသငျမြား ပိုမြားလာတတျပါသညျ။
၄ ) – ကိုယျဝနျဆောငျမြား လိုငျခြီးသီးစားလြှငျမြားမြား မစားသငျ့ပါ။
စားလြှငျလညျး အစာစားပွီးမှ အနညျးငယျသာစားရပါမညျ – မစားသညျက အကောငျးဆုံးဖွဈပါသညျ။
အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော ဂလူးကို့ဈဓာတျမြား ရုတျတရတျလြှော့နညျးသှားလြှငျ သန်ဓေ သားကို ထိခိုကျစနေိုငျတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
၅ ) – နို့တိုကျမိခငျမြားအနနေဲ့ လိုငျခြီးသီးကို ရှောငျထားသညျက ပိုကောငျးပါသညျ။
ဟိုကျပိုဂလိုကျစငျမြားသညျ သှေးထဲကနေ ကလေးဆီကိုရောကျသှားလြှငျ ကလေး အနနေဲ့အန်တရာယျရှိပါသညျ။
ကလေးဆိုသညျမှာ နို့တမြိုးတညျးပဲ အဓိကစို့သောကွောငျ့ ပိုဆိုးတတျပါသညျ။
၆ ) – ဆီးခြို သှေးခြိုသမားမြားအနနှေငျ့ ဆီးခြို သှေးခြိုကဆြေးမြား. ( ဥပမာ ) Metformin သောကျနလြှေငျ ရုတျတရတျ ဂလူးကိုဈ့ဓာတျ ကဆြငျးသှားတာကွောငျ့ အန်တရာယျ ရှိပါသညျ။
ဆေးကိုညှိပွီးသောကျရနျ ( Adjustment- ပွငျဆငျ ညှိဖို့) လိုပါသညျ။
လိုင်ချီးသီးကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ စားနည်း
လိုင်ချီးသီးက အဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝသည့်အပြင် အရသာလည်းရှိပါသည်။ အနံ့မွှေးသောကြောင့် လူတိုင်းနီးပါး နှစ်သက်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် အန္တရာယ်ကင်းအောင်စားမည်ဆိုလျှင် အောက်ပါအချက်များအတိုင်း..စားပေးရပါမည်။
၁ ) – အသီးကိုမှည့်မှ စားရပါမည် – မမှည့်သေးလျှင် မစားရပါ။
မမှည့်သေးခင် စားမည်ဆိုလျှင် အသားထဲတွင် ဟိုက်ပိုဂလိုက်စင် များစွာပါပါသည်။
အစေ့ထဲ မှည့်သွားလျင် အစေ့ထဲကို ရောက်ကုန်သောကြောင့် စိတ်ချစွာ စားနိုင်ပါသည်။
၂ ) – စားသည့်အခါ အစေ့ကိုလုံးဝ မစားရပါ – ဟိုက်ပိုဂလိုစင်များသည် အစေ့ထဲတွင် အဓိက ပါဝင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ။
အသီးမှည့်လေလေ အစေ့ထဲတွင် ပါဝင်မူ များလေလေ ဖြစ်ပါသည်။
၃ ) – စားသည့်အခါ အစာ ( ထမင်းစားပြီး) စားပြီးမှစားရပါမည်။
အစာမရှိပဲစားလျှင် အစာအိမ်ထဲက MCPA- CoAအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခြင်း ကြောင့် ဂလူးကိုစ့် ကျစေသော အာနိသင်များ ပိုများလာတတ်ပါသည်။
၄ ) – ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ လိုင်ချီးသီးစားလျှင်များများ မစားသင့်ပါ။
စားလျှင်လည်း အစာစားပြီးမှ အနည်းငယ်သာစားရပါမည် – မစားသည်က အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဂလူးကို့စ်ဓာတ်များ ရုတ်တရတ်လျှော့နည်းသွားလျှင် သန္ဓေ သားကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
၅ ) – နို့တိုက်မိခင်များအနေနဲ့ လိုင်ချီးသီးကို ရှောင်ထားသည်က ပိုကောင်းပါသည်။
ဟိုက်ပိုဂလိုက်စင်များသည် သွေးထဲကနေ ကလေးဆီကိုရောက်သွားလျှင် ကလေး အနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိပါသည်။
ကလေးဆိုသည်မှာ နို့တမျိုးတည်းပဲ အဓိကစို့သောကြောင့် ပိုဆိုးတတ်ပါသည်။
၆ ) – ဆီးချို သွေးချိုသမားများအနေနှင့် ဆီးချို သွေးချိုကျဆေးများ. ( ဥပမာ ) Metformin သောက်နေလျှင် ရုတ်တရတ် ဂလူးကိုစ့်ဓာတ် ကျဆင်းသွားတာကြောင့် အန္တရာယ် ရှိပါသည်။
ဆေးကိုညှိပြီးသောက်ရန် ( Adjustment- ပြင်ဆင် ညှိဖို့) လိုပါသည်။
မာယာမြားလှနျး တဲ့ ကိုဗဈ နဲ့ (၄) ရကျလောကျ ပိုးမတှတေ့ာ နဲ့ ပေါ့လြော့လာကွ တဲ့ သူတှေ
အေ လ့အကငျြ့ကောငျးတှေ ဘယျလောကျ တငျကနျြမလဲ
ပိုးမတှတေ့ာ ကွာတဲ့အခါ ကိုယျ့ရဲ့ နထေိုငျမှုဟာ လြော့ရဲလာတယျ။ လကျဆေးတာ အကွိမျရေ နညျးသှားတယျ။ တခါဆေးရငျ စက်ကနျ့ ၂၀ ကှကျတိ ကမြကြ မမှနျးတော့ဘူး၊ ဖဝါးဖမိုးလကျခေါကျခြိုး ကဗြာနဲ့ တိုကျမစဈတော့ဘူး။
အလုပျမှာ ထမငျးစားပွီး mask ကို ခကျြခငျြးပွနျမတပျပဲ လရေဲ့ အရသာကို ကွာကွာခံမိလာတယျ။ မကျြနှာပျေါက mask ကို ပွငျကာနီး၊ ယားလို့ ကုတျကာနီး လကျဆေးပွီးမှာ ထိတာ၊ ကုတျပွီးရငျ လကျဆေးတာ မလုပျပဲ (ငါဘာမှ ထိမထားပဲလေ) လို့ ဆငျခွတှေေ ပါလာတယျ
ဒါ ကိုယျ့တဦးထဲ ပေါ့လြော့လာမှုတှပေါ။ ဒီလိုပဲ လူထုဟာလညျး ပေါ့လြော့လာပါပွီ။ တနျးစီရငျ နရောကွားဖွတျဝငျခငျြတာ၊ နောကျနားမှာ ဇှတျကပျလာတာ၊ mask မပါပဲ လူကွားမှာ တိုးတာတှေ လုပျလာပွီ။
တကယျတော့ တခြို့ အလအေ့ထတှသေညျ ပိုးရှိရှိ မရှိရှိ သယျဆောငျသှားရမှာတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အကွောကျတရားကွောငျ့သာ ဖွဈလာတဲ့ အလအေ့ထသညျ အပွုအမူ ပွောငျးလဲခွငျး Behavior Change အထိ တောငျ့မခံနိုငျပဲ လနေဲ့အတူ ပွနျလှငျ့မြောခဲ့ပွီ။ လကျဆေးတာ ဘယျတော့မဆို ရှိရမယျ့ အကငျြ့။ ခပျခှာခှာနတော အမွဲ ရှိရမယျ့ အကငျြ့။
ပိုးတှမှေု့ လြော့ကလြာခွငျးနဲ့ အတူ သံပတျတငျးထားတာတှလေညျး ဖွေးဖွေးခငျြး လြော့ကလြာနတေယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ကိုဗဈရဲ့ မာယာဟာ ဘာဆိုဘာမှ မပွောနိုငျသေးတဲ့အခြိနျပါ။ သူ့မှာ ကွောကျဖို့ အကောငျးဆုံးက (အမွငျမှာ) အကောငျးပကတိရှိနတေဲ့ ပိုးရှိသူ တခွားသူကို ကူးစကျစတောပါပဲ။
ငွိမျလောကျပွီ ထငျကာမှ အလုံးအရငျးနဲ့ ပေါကျကှဲမှုဟာ ဖွဈနိုငျသေးတယျဆိုတာ အမွဲ တှေးထားရပါမယျ။ ဘယျသူပေါ့ပေါ့ ကိုယျမပေါ့သငျ့ဘူးဆိုတာ ကိုယျ့ဘာသာ ပွနျလညျ နှလုံးသှငျးနရေတယျ။
အေ လ့အကျင့်ကောင်းတွေ ဘယ်လောက် တင်ကျန်မလဲ
ပိုးမတွေ့တာ ကြာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ နေထိုင်မှုဟာ လျော့ရဲလာတယ်။ လက်ဆေးတာ အကြိမ်ရေ နည်းသွားတယ်။ တခါဆေးရင် စက္ကန့် ၂၀ ကွက်တိ ကျမကျ မမှန်းတော့ဘူး၊ ဖဝါးဖမိုးလက်ခေါက်ချိုး ကဗျာနဲ့ တိုက်မစစ်တော့ဘူး။
အလုပ်မှာ ထမင်းစားပြီး mask ကို ချက်ချင်းပြန်မတပ်ပဲ လေရဲ့ အရသာကို ကြာကြာခံမိလာတယ်။ မျက်နှာပေါ်က mask ကို ပြင်ကာနီး၊ ယားလို့ ကုတ်ကာနီး လက်ဆေးပြီးမှာ ထိတာ၊ ကုတ်ပြီးရင် လက်ဆေးတာ မလုပ်ပဲ (ငါဘာမှ ထိမထားပဲလေ) လို့ ဆင်ခြေတွေ ပါလာတယ်
ဒါ ကိုယ့်တဦးထဲ ပေါ့လျော့လာမှုတွေပါ။ ဒီလိုပဲ လူထုဟာလည်း ပေါ့လျော့လာပါပြီ။ တန်းစီရင် နေရာကြားဖြတ်ဝင်ချင်တာ၊ နောက်နားမှာ ဇွတ်ကပ်လာတာ၊ mask မပါပဲ လူကြားမှာ တိုးတာတွေ လုပ်လာပြီ။
တကယ်တော့ တချို့ အလေ့အထတွေသည် ပိုးရှိရှိ မရှိရှိ သယ်ဆောင်သွားရမှာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောက်တရားကြောင့်သာ ဖြစ်လာတဲ့ အလေ့အထသည် အပြုအမူ ပြောင်းလဲခြင်း Behavior Change အထိ တောင့်မခံနိုင်ပဲ လေနဲ့အတူ ပြန်လွင့်မျောခဲ့ပြီ။ လက်ဆေးတာ ဘယ်တော့မဆို ရှိရမယ့် အကျင့်။ ခပ်ခွာခွာနေတာ အမြဲ ရှိရမယ့် အကျင့်။
ပိုးတွေ့မှု လျော့ကျလာခြင်းနဲ့ အတူ သံပတ်တင်းထားတာတွေလည်း ဖြေးဖြေးချင်း လျော့ကျလာနေတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုဗစ်ရဲ့ မာယာဟာ ဘာဆိုဘာမှ မပြောနိုင်သေးတဲ့အချိန်ပါ။ သူ့မှာ ကြောက်ဖို့ အကောင်းဆုံးက (အမြင်မှာ) အကောင်းပကတိရှိနေတဲ့ ပိုးရှိသူ တခြားသူကို ကူးစက်စေတာပါပဲ။
ငြိမ်လောက်ပြီ ထင်ကာမှ အလုံးအရင်းနဲ့ ပေါက်ကွဲမှုဟာ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာ အမြဲ တွေးထားရပါမယ်။ ဘယ်သူပေါ့ပေါ့ ကိုယ်မပေါ့သင့်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်လည် နှလုံးသွင်းနေရတယ်။
ထူးထူးဆနျးဆနျး မိနျးကလေး ဖိနပျတှေ ကိုဘဲ လိုကျခိုးတာ စဈဆေးကွညျ့တော့ သိလိုကျရတဲ့ အံဖှယျဖွဈရပျ
ဖိနပျသူခိုးဟာ အခွားသူခိုးတှလေို အမြိုးသမီးအတှငျးခံဘောငျးဘီနဲ့ ဘရာစီယာတှကေိုလိုကျလံခိုးယူတာမြိုးမဟုတျဘဲ ဖိနပျတှကေိုမှ စိတျ အာသီသရှိပွီး အခုလိုလိုကျလံခိုးယူပွီး ညအိပျခြိနျဖကျအိပျကာ တဈကိုယျရညျလိငျစိတျဖွဖြေောကျခဲ့တာဖွဈတယျလို့ ဝနျခံခဲ့ပါတယျ ။ဒီလို ထူးဆနျးစှာပွုမှုလာတာဟာ ၁၃ နှဈသားကနစေတငျခဲ့တာလို့ ပွောပါတယျ။
ထိုအခြိနျထဲက စိတျပိုငျးဆိုငျရာပွောငျလဲလာပွီး ဖိနပျတှကေို စတငျခိုးယူလာခဲ့တာဖွဈတယျလို့ပွောပါတယျ ။ ယခု သတငျးကို ( SiThu Maung ) စာမကျြနှာ မှ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ မြှဝေ တငျဆကျခွငျး ဖွဈပါသညျ။ကွံကွံဖနျဖနျ မိနျးကလေး ဖိနပျမြိုးစုံ ကို လိုကျလံခိုးယူကာ ဖကျအိပျပွီး တဈကိုယျရညျ လိငျစိတျဖွသေူကိုရဲတပျဖှဲ့မှဖမျးဆီးရမိခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျးငံ နှနျထဘူရီခရိုငျ ဘနျ့ကလှမွေို့နယျ ဘနျခှနျထောငျးကြေးရှာအုပျစု ၊ ရပျကှကျ (၅) အမှတျ (၁၆) မှာနထေိုငျတဲ့ အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျ ထီးလဖတျ ဆိုသူလူငယျဟာ ညဘကျဆိုငျကယျနဲ့ နအေိမျအခနျးငှားနဲ့ အခွားအဆောငျတှမှော ဖိနပျမြိုးစုံကို လိုကျလံခိုးယူမှု ကွောငျ့ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
၎င်းငျးနအေိမျ အခနျးတှငျးမှာ ဖိနပျမြိုးစုအရံပေါငျး ၁၂၆ ရံနဲ့အတူမလေ ၂၄ ရကျနကေ့ ၎င်းငျး၏နအေိမျအခနျးတှငျ ရဲတပျဖှဲ့မှ ဖမျးဆီးရမိခဲ့တယျ လို့ဆိုပါတယျ ။ခုတော့ ရဲတပျဖှဲ့ကတရားဥပဒအေရ အရေးယူဆောငျရှကျရမှာ ဖွဈပွီး စိတျကမ်ြမာရေး အရ စိတ်တဇရောဂါပိုငျးဆိုငျရာရှိ/မရှိ စဈဆေးသှားမယျလို့ လညျးသိရှိ ရပါတယျ ။
ဖိနပ်သူခိုးဟာ အခြားသူခိုးတွေလို အမျိုးသမီးအတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ ဘရာစီယာတွေကိုလိုက်လံခိုးယူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဖိနပ်တွေကိုမှ စိတ် အာသီသရှိပြီး အခုလိုလိုက်လံခိုးယူပြီး ညအိပ်ချိန်ဖက်အိပ်ကာ တစ်ကိုယ်ရည်လိင်စိတ်ဖြေဖျောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ် ။ဒီလို ထူးဆန်းစွာပြုမှုလာတာဟာ ၁၃ နှစ်သားကနေစတင်ခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။
ထိုအချိန်ထဲက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်လဲလာပြီး ဖိနပ်တွေကို စတင်ခိုးယူလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် ။ ယခု သတင်းကို ( SiThu Maung ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ကြံကြံဖန်ဖန် မိန်းကလေး ဖိနပ်မျိုးစုံ ကို လိုက်လံခိုးယူကာ ဖက်အိပ်ပြီး တစ်ကိုယ်ရည် လိင်စိတ်ဖြေသူကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်းငံ နွန်ထဘူရီခရိုင် ဘန့်ကလွေ့မြို့နယ် ဘန်ခွန်ထောင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ရပ်ကွက် (၅) အမှတ် (၁၆) မှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ထီးလဖတ် ဆိုသူလူငယ်ဟာ ညဘက်ဆိုင်ကယ်နဲ့ နေအိမ်အခန်းငှားနဲ့ အခြားအဆောင်တွေမှာ ဖိနပ်မျိုးစုံကို လိုက်လံခိုးယူမှု ကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းနေအိမ် အခန်းတွင်းမှာ ဖိနပ်မျိုးစုအရံပေါင်း ၁၂၆ ရံနဲ့အတူမေလ ၂၄ ရက်နေ့က ၎င်း၏နေအိမ်အခန်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ် ။ခုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး စိတ်ကျမ္မာရေး အရ စိတ္တဇရောဂါပိုင်းဆိုင်ရာရှိ/မရှိ စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ လည်းသိရှိ ရပါတယ် ။
ပိုကျ ဆံတှေ အမြားကွီးရှာနိုငျပေ မဲ့ အရငျ လိုမပြျောတော့တဲ့အကွောငျး ကိုပွောလာ တဲ့ နှငျးအိအိဝငျး
မွနျမာအိုငျဒေါ Season-4 ရဲ့ဆနျခါတငျပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျဖွဈသူ နှငျးအိအိဝငျးကတော့
မွနျမာအိုငျဒေါအဆိုတျောတဈယောကျမဟုတျခငျ အရငျက တီးဝိုငျးငယျလေးတှမှော သီခငျြးဆိုခဲ့တဲ့အတိတျကာလကို ပွနျလညျမြှဝခေဲ့ပါတယျ။
သူကတော့ ငယျငယျကတညျးက ဂီတကိုရူးသှပျခဲ့သူတဈယောကျဖွဈတာမို့ မွို့တှငျးကငျြးပတဲ့ပွိုငျပှဲငယျလေးတှမှော ဝငျပွိုငျရငျး ဂီတလမျးကွောငျးပျေါရောကျခဲ့သူပါ။
ကိုးတနျး၊ဆယျတနျးနှဈလောကျမှာ ဆရာတဈယောကျနဲ့တှခေဲ့ပွီး သူတို့တီးဝိုငျးနဲ့အတူ လေး၊ငါးနှဈလောကျ အနယျနယျအရပျရပျ ပှဲတှလှေညျ့ဆိုခဲ့ပါတယျတဲ့။
သူကတော့ အဲ့တုနျးကတညျးက တဈပှဲကို ငါးသောငျးရခဲ့ပွီး မိဘကိုလညျး ငယျငယျလေးကတညျးက ရှာကြှေးနိုငျခဲ့တဲ့အပွငျ ကြောငျးစရိတျ၊ကြူရှငျစရိတျတှပေါ ကိုယျ့ဟာကိုယျရှာနိုငျခဲ့သူပါ။
အဖနေဲ့အမကေတော့ သူ့သမီးလေးကို နိုငျငံကြျောအဆိုတျောတဈယောကျ ဖွဈစခေငျြတာမို့ Myanmar Idol Season-3 မှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး
Golden Week Round 1 မှာပဲပွုတျခဲ့ပါတယျတဲ့။ Season-4 မှာ ထပျပွီး ဝငျပွိုငျခဲ့ရာမှ အခုလို ဆနျခါတငျစာရငျးဝငျ တဈယောကျဖွဈလာခဲ့သူပါ။
နှငျးအိအိဝငျးကတော့ အခုလိုမွနျမာအိုငျဒေါအဆိုတျောတဈယောကျ ဖွဈလာပွီးနောကျပိုငျးမှာ အရငျတုနျးက ပှဲဆိုရတာပငျပနျးလှနျးလို့ မသှားခငျြဘူး
ပွောခဲ့တာတှေ၊ မိဘကို (၅၀၀၀၀) ရှာပေးနိုငျတာကို အဟုတျကွီးထငျခဲ့တာတှကေ ဘာမှမဟုတျပါလားလို့ တှေးမိပါတယျတဲ့။
ဒါပမေယျ့ အခုလို ရနျကုနျမှာတဈယောကျထဲနပွေီး သိနျးဆယျခြီရှာနိုငျတဲ့ဘဝထကျ အရငျလို (၅၀၀၀၀) ပဲရှာနိုငျပွီး အမနေဲ့အတူတူနရေတဲ့ဘဝလေးက
ပိုအေးခမျြးပါတယျဆိုတဲ့အကွောငျး ရငျထဲကခံစားခကျြတှကေို ဖှငျ့ဟခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ပိုက် ဆံတွေ အများကြီးရှာနိုင်ပေ မဲ့ အရင် လိုမပျော်တော့တဲ့အကြောင်း ကိုပြောလာ တဲ့ နှင်းအိအိဝင်း
မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-4 ရဲ့ဆန်ခါတင်ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ နှင်းအိအိဝင်းကတော့
မြန်မာအိုင်ဒေါအဆိုတော်တစ်ယောက်မဟုတ်ခင် အရင်က တီးဝိုင်းငယ်လေးတွေမှာ သီချင်းဆိုခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
သူကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဂီတကိုရူးသွပ်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ မြို့တွင်းကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲငယ်လေးတွေမှာ ဝင်ပြိုင်ရင်း ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ခဲ့သူပါ။
ကိုးတန်း၊ဆယ်တန်းနှစ်လောက်မှာ ဆရာတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး သူတို့တီးဝိုင်းနဲ့အတူ လေး၊ငါးနှစ်လောက် အနယ်နယ်အရပ်ရပ် ပွဲတွေလှည့်ဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့။
သူကတော့ အဲ့တုန်းကတည်းက တစ်ပွဲကို ငါးသောင်းရခဲ့ပြီး မိဘကိုလည်း ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ရှာကျွေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ကျောင်းစရိတ်၊ကျူရှင်စရိတ်တွေပါ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာနိုင်ခဲ့သူပါ။
အဖေနဲ့အမေကတော့ သူ့သမီးလေးကို နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်စေချင်တာမို့ Myanmar Idol Season-3 မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး
Golden Week Round 1 မှာပဲပြုတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ Season-4 မှာ ထပ်ပြီး ဝင်ပြိုင်ခဲ့ရာမှ အခုလို ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သူပါ။
နှင်းအိအိဝင်းကတော့ အခုလိုမြန်မာအိုင်ဒေါအဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အရင်တုန်းက ပွဲဆိုရတာပင်ပန်းလွန်းလို့ မသွားချင်ဘူး
ပြောခဲ့တာတွေ၊ မိဘကို (၅၀၀၀၀) ရှာပေးနိုင်တာကို အဟုတ်ကြီးထင်ခဲ့တာတွေက ဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့ တွေးမိပါတယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် အခုလို ရန်ကုန်မှာတစ်ယောက်ထဲနေပြီး သိန်းဆယ်ချီရှာနိုင်တဲ့ဘဝထက် အရင်လို (၅၀၀၀၀) ပဲရှာနိုင်ပြီး အမေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ဘဝလေးက
ပိုအေးချမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယျအခြိနျမြိုးမှာ ဘယျအစားအသောကျတှကေို စားသုံးသငျ့တယျ ဆိုတဲ့ သတျမှတျခကျြတှရှေိနပေမေဲ့ ကြှနျတျောတို့က အမှတျတမဲ့နဲ့ပဲ စားမိနေ တတျကွပါတယျ ။ စားသငျ့တဲ့အခြိနျလှဲမှားပွီးစားသောကျနကွေတဲ့ အစား အသောကျ (၄) မြိုးကတော့
နှားနို့ကို ညအခြိနျမှာ သောကျတာက မှနျကနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မနကျခငျးမှာတေ့ာ နှားနို့ မသောကျသငျ့ပါဘူး။ မနကျခငျး အိပျရာက ထတဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျက တကျကွှလနျးဆနျးနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နှားနို့သောကျဖို့ မလိုသေးတာပါ။ နှားနို့ဟာ ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ အဆီပိုတှကေို လြော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။ နောကျပွီး ပိုအိပျပြျောစပေါတယျ။ ညအခြိနျ အနားယူတဲ့အခါမှာ နှားနို့သောကျတာက ကွှကျသားတှနေဲ့ ခန်ဓာကိုယျဆဲလျတှကေို အထူးကောငျးမှနျစနေိုငျပါတယျ။
ထမငျးကို ဖွဈနိုငျရငျ ညအခြိနျမှာ ထမငျးမစားသငျ့ဘဲ နလေ့ယျစာစားတဲ့ အခြိနျမှာ စားတာက အမှနျကနျဆုံး ဖွဈပါတယျ ။ နလေ့ယျမှာပဲ စားသငျ့တဲ့အကွောငျး ကတော့ ခန်ဓာကိုယျက ဇီဝဖွဈပကျြမူတှဟော ညဘကျထကျ နဘေ့ကျမှာ ပိုပွီးတော့ ဖွဈပကျြတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
ရခေဲမုနျ့တို့ ခြောကလကျတို့ သကွားနဲ့ လုပျထားတဲ့ အစားအစားအားလုံးကို မနကျခငျးမှာ စားတာ အကောငျးဆုံး ဖွဈပါတယျ။ မနကျခငျးမှာ သကွား စား တာက ခန်ဓာကိုယျမှာ လိုအပျနတေဲ့ သကွားဓာတျတှကေို ဖွညျ့ပေးတာဖွဈလို့ တဈနတေ့ာလုံး သကွားဓာတျ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ ရရှိမှာဖွဈပွီး ပိုမိုပွီးလညျး တကျကွှ လနျးဆနျးစပေါလိမျ့မယျ။ ညဘကျမှာ သကွားစားတာကတော့ ခန်ဓာကိုယျ ကိုယျမှာ ရှိတဲ့အဆီကို ပိုတကျလာစပွေီး ဝစပေါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ညဘကျ သကွား မစားသငျ့ပါဘူး ။
ငှကျပြောသီးကို နလေ့ယျဘကျမှာ စားတာဟာ အကောငျးဆုံးပါ။ ငှကျပြောသီးဟာ အမဉျြဓာတျကွှယျဝတဲ့ အစားအစာဖွဈလို့ အစာခဖြေကျြပေးမူကိုလညျး ကူညီပေး နိုငျပါတယျ။ တဈနတေ့ာလုံးအတှကျလညျး ခှနျအားပွညျ့ဝနစေပေါလိမျ့မယျ။
ညဘကျမှာ ငှကျပြောသီးစားရငျတော့ ခြှဲသလိပျကွပျပွီး ခြောငျးဆိုးနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ အပွငျ ညဘကျ အစာအိမျထဲမှာ ဘာမှမရှိတဲ့အခါ ငှကျပြောသီး စားမိသှားရငျ အစာအိမျအတှကျ ပွဿနာလညျး ဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ။
ဘယ်အချိန်မျိုးမှာ ဘယ်အစားအသောက်တွေကို စားသုံးသင့်တယ် ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က အမှတ်တမဲ့နဲ့ပဲ စားမိနေ တတ်ကြပါတယ် ။ စားသင့်တဲ့အချိန်လွဲမှားပြီးစားသောက်နေကြတဲ့ အစား အသောက် (၄) မျိုးကတော့
နွားနို့ကို ညအချိန်မှာ သောက်တာက မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနက်ခင်းမှာတေ့ာ နွားနို့ မသောက်သင့်ပါဘူး။ မနက်ခင်း အိပ်ရာက ထတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်က တက်ကြွလန်းဆန်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နွားနို့သောက်ဖို့ မလိုသေးတာပါ။ နွားနို့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆီပိုတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပိုအိပ်ပျော်စေပါတယ်။ ညအချိန် အနားယူတဲ့အခါမှာ နွားနို့သောက်တာက ကြွက်သားတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်တွေကို အထူးကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
ထမင်းကို ဖြစ်နိုင်ရင် ညအချိန်မှာ ထမင်းမစားသင့်ဘဲ နေ့လယ်စာစားတဲ့ အချိန်မှာ စားတာက အမှန်ကန်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ် ။ နေ့လယ်မှာပဲ စားသင့်တဲ့အကြောင်း ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်က ဇီဝဖြစ်ပျက်မူတွေဟာ ညဘက်ထက် နေ့ဘက်မှာ ပိုပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ရေခဲမုန့်တို့ ချောကလက်တို့ သကြားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အစားအစားအားလုံးကို မနက်ခင်းမှာ စားတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ခင်းမှာ သကြား စား တာက ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ သကြားဓာတ်တွေကို ဖြည့်ပေးတာဖြစ်လို့ တစ်နေ့တာလုံး သကြားဓာတ် ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုပြီးလည်း တက်ကြွ လန်းဆန်းစေပါလိမ့်မယ်။ ညဘက်မှာ သကြားစားတာကတော့ ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ်မှာ ရှိတဲ့အဆီကို ပိုတက်လာစေပြီး ဝစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ညဘက် သကြား မစားသင့်ပါဘူး ။
ငှက်ပျောသီးကို နေ့လယ်ဘက်မှာ စားတာဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ ငှက်ပျောသီးဟာ အမျဉ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာဖြစ်လို့ အစာချေဖျက်ပေးမူကိုလည်း ကူညီပေး နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုံးအတွက်လည်း ခွန်အားပြည့်ဝနေစေပါလိမ့်မယ်။
ညဘက်မှာ ငှက်ပျောသီးစားရင်တော့ ချွဲသလိပ်ကြပ်ပြီး ချောင်းဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် ညဘက် အစာအိမ်ထဲမှာ ဘာမှမရှိတဲ့အခါ ငှက်ပျောသီး စားမိသွားရင် အစာအိမ်အတွက် ပြဿနာလည်း ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
နှရောသီ မှာ သငျ့ အသားအရညျ ထိနျးသိမျးဖို့ စားသုံးပေးသငျ့သညျမြား
နှရောသီ မှာ အသားအရညျ ထိနျးသိမျးဖို့ ဒါတှစေားကွမယျ။
၄။ Cauliflower (ပနျးဂျေါဖီ) နဲ့ broccoli ( ဂျေါဖီစိမျး) ပနျးဂျေါဖီမှာ antioxidants တှနေဲ့ histidine တှပေါဝငျလို့ နလေောငျခွငျးကို ကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ သဘာဝ အစားအစာလေးလို့ ပွောကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ sulforaphane လို့ချေါတဲ့ ဂျေါဖီစိမျးမှာ ပါဝငျတဲ့ ပစ်စညျးလေးက ခရမျးလှနျရောငျခွညျကွောငျ့ အသားအရညျ နီမွနျးပကျြစီး သှားခွငျး ကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
နွေရာသီ မှာ အသားအရည် ထိန်းသိမ်းဖို့ ဒါတွေစားကြမယ်။
အခုလို ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာ နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် အသားအရည် တွေ ထိခိုက်ပျက်စီးကြရပါတယ်။ နေလောင်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့ နေလောင်ကာကွယ်ဆေးကြို လိမ်းတာ၊ နေရောင်အောက်ကို တိုက်ရိုက်ထွက်တဲ့အခါ ဦးထုပ်၊ ထီး နဲ့ အခြားအကာအကွယ်တွေ အသုံးပြုတာ စတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ ဆောင်းပါးလေးမှာ ပြောပြပေးချင်တာကတော့ အဲဒီလို နည်းလမ်းတွေအပြင် နေလောင်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာလေးတွေအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Blueberries ( ဘလူးဘယ်ရီသီး )
နေရောင်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ အရေပြားကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ free radicals လေးတွေ ထွက်လာပါတယ်။ Blueberries သီးလေးတွေမှာ အဲဒီ free readicals လေးတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ antioxidants တွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Blueberries သီးလေးတွေမှာ ဗီတာမင် C ဓာတ်လည်း အများကြီးပါဝင်တာကြောင့် အရေးအကြောင်းလေးတွေ ဖြစ်လာတာကိုလည်း တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့် Blueberries သီးလေးတွေကို နွေရာသီအစားအစာ (summer food) လို့တောင်ခေါ်ကြပါတယ်။
စာရေးသူကတော့ နွေရာသီဆိုရင် အရည်ရွှမ်းပြီး အေးမြစေတဲ့ ဖရဲသီးကိုပဲ ပြေးမြင်မိပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ ရင်ကိုအေးစေတဲ့အပြင် ဖရဲသီးလေးတွေမှာ Lycopene လို့ခေါ်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် UV –A နဲ့ UV-B ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့ အတွက် သဘာဝနေကာလေးလို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ နေ့တိုင်းပုံမှန်စားပေးမယ်ဆိုရင် ရတ်သတ်အပတ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် သဘာဝ အကာအကွယ်လေးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၃။ Carrot and Leafy Greens ( မုန်လာဥနီ နဲ့ အစိမ်းရောင်အရွက်များ)
မုန်လာဥနီ မှာ beta carotene, lycopene , နဲ့ ဗီတာမင် C သုံမျိုးစလုံးပါဝင်တာကြောင့် နေရောင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နေလောင်ခြင်းတွေ နဲ့ အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော် ပြီး အရေးအကြောင်းဖြစ်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆလပ်ရွက်၊ ဟင်းနုနွယ် စတဲ့ အစိမ်းရောင်အရွက်တွေမှာလည်း beta carotene အပြင် နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသားအရေပျက်စီးခြင်းကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ antioxidant တွေလည်း ပါဝင်တာကြောင့် ပုံမှန်လေးစားပေးသင့်ပါတယ်။
၄။ Cauliflower (ပန်းဂေါ်ဖီ) နဲ့ broccoli ( ဂေါ်ဖီစိမ်း) ပန်းဂေါ်ဖီမှာ antioxidants တွေနဲ့ histidine တွေပါဝင်လို့ နေလောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝ အစားအစာလေးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် sulforaphane လို့ခေါ်တဲ့ ဂေါ်ဖီစိမ်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးက ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရည် နီမြန်းပျက်စီး သွားခြင်း ကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Green tea ဟာ အရေပြားကို နေလောင်ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အသားအရည်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေနဲ့ ရေဓာတ်ကိုလည်း ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ- သစ်ကြားသီး၊ chia seeds စတဲ့ အစေ့အဆံတွေမှာ omega3fatty acid ပါဝင်ပါတယ်။ omega3fatty acid ဟာ အရေပြားတင်းရင်းလှပအောင် ကူညီပေးနိုင်ပြီး နေလောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသားအရည်ပြသနာတွေကို သဘာဝအတိုင်း သက်သာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၇။ ဒါ့အပြင် ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ထောပတ်သီး၊ သလဲသီးစတဲ့ အသီးတွေကလည်း နေလောင်ဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသားအရည်ပြသနာတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
နေလောင်ကာလိမ်းဆေးတွေ လိမ်းခြင်း၊ အကာအကွယ် ပစ္စည်းတွေ အသုံးပြုခြင်း သာမက ဒီလို သဘာဝအစားအစာလေးတွေကိုပါ နေ့စဉ် တွဲဖက်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ပြင်းထန်တဲ့ ဒီနွေရာသီကြီးကို ကောင်းကောင်းကြီးအံတုနိုင်ပြီး အမြဲနုပျိုလှပတဲ့ အသားအည်ကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေလောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသားအရည်ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။